Kiisaska iyo dhimashada Corona ee Somaliland oo sarre u kacday
Sidda laga soo xigtay warbixinta maalinlaha ah ee wasaaradda, 11 kamid ah bukaanadda waa rag, 8 qofna waa dumar.
HARGEYSA, Somaliland – Wasaaradda Caafimaadka maamulka Somaliland ayaa maanta oo Sabti ah ku dhawaaqdey in 48-kii saac ee lasoo dhaafay ay diiwaan-gelisay 19 kiisas cusub oo ah safmareenka Coronavirus.
Sidda laga soo xigtay warbixinta maalinlaha ah ee wasaaradda, kow iyo tobban  kamid ah bukaanadda waa rag, 8 qofna waa dumar.
Dhamaantooda waa muwaadiniin, balse waxaa kamid ah lix ruux oo dhowaan kasoo laabatay Jamhuuriyadda Jabuuti, sidda ku cad warbixinta.
Da’da bukaanadan cusub waxa ay u dhaxaysaa: 10jir ilaa 20jir = 1 qof, 20jir ilaa 30jir = 2 qof, 30jir ilaa 40jir = 1 qof, 40jir ilaa 50jir = 4 qof, 50jir ilaa 60jir = 6 qof iyo 60jir ilaa 70jir = 5 qof.
Bukaanadan waxaa 13 kamid ah ay degen yihiin Gobolka Maroodi Jeex - magaaladda Hargeysa, halka 6 qofna degen yihiin Gobolka Awdal - magaalada Boorama.
Waxaa xanuunka ka bogsaday, saacadihii lasoo dhaafay, hal qof taasi oo ka dhigaysa tirada guud ee caafimaadey sideed .
Laba qof oo da’doodu ahayd 76-jir iyo 52-jir ayaa sidoo kale geeriyooday taasi oo ka dhigaysa dadka xanuunkan u dhintay dalkeena sideed (8). Labada marxuum waxay horey ula ildarnaayeen xanuuno kale.
Ugu dambeyntii, wasaaradda ayaa cod dheer ugu waanisay dadweynaha in ay raacaan talooyinka caafimaadka "maadaama cudurka uu si baaxad leh u faafayo, isla markaana saameyntiisa ay sii kordheyso".
Caabuqaan dilaaga ah ayaa isbedel muuqda ku sameeyay hab-sami-u-socodka shirarka maamulka Hargeysa.
Ajaaniib kamid ah dad horleh oo Somaliland ay ka heshay Covid-19
Somaliland 02.06.2020. 11:15
Dhimashada iyo kiisaska Coronavirus ee Somaliland oo sarre u kacday
Somaliland 30.05.2020. 10:30
Covid-19: Somaliland oo amar kusoo rogtay Masaajida iyo Ajaaniibta
Somaliland 13.04.2020. 16:50
Ilhaan Cumar oo digniin kasoo saartey khatar kusoo wajahan Soomaaliya
Soomaliya 16.09.2020. 17:00
Somaliland oo diiwaan-gelisay kiisas cusub oo ah safmarka Coronavirus
Somaliland 27.05.2020. 11:00
Soomaaliya oo laga hirgeliyey App bixinaya talooyin la xiriira Covid-19
Soomaliya 07.05.2020. 16:40